Anyị chefuo ihe ọ bụla? | Apg29
Anyị chefuo ihe ọ bụla?
"Gọzie Jehova, mkpụrụ obi m, na -echefu bụghị ya nile uru" Psalm. 103: 2
Otú mfe ọ bụ ichefu ihe. Ị na-echeta ụbọchị ị na-azọpụta, ma ọ bụ oge ị nwetara azịza ekpere. Mgbe ahụ tụgharịa ndụ na ọ dị mfe ichefu. Mgbe ụfọdụ, mgbe ọnọdụ na-iji aka gị dum na-elekwasị anya, ị na-mgbe ụfọdụ na-echetara onwe ha: Yeah yeah, Jesus ndụ.
" Ya mere, m ga-agaghị eleghara anya na niile na-echetara gị nke a, ọ bụ ezie na ị na-ama maara na ọ na na-consolidating n'eziokwu nke dị n'ime gị." 2 Pet. 1:12
Ọ bụ ezie na anyị na-ama ma na-consolidating na eziokwu, anyị mkpa ka e chetara. Mgbe ị na-agụ Bible gị ga-echetara. Mgbe ị na-anụ ozizi na ị ga-echetara. Mgbe ị na-eche ihe ịma aka na-echetara gị otú Jehova emewo mbụ nyeere gị na ndị ọzọ. Ihe anyị na-ahụ ma na-anụ ugbu a chọrọ iweghara ndụ anyị. Ma ndụ ya na Chineke bụ a ije nke okwukwe, a kweere na-apụghị ịhụ anya. Ma, site n'okwukwe, anyị pụrụ ịhụ ka Invisible (Heb. 11:27). Na otu ụbọchị na heaven, " mgbe ahụ, anyị ga-ahụ ihu na ihu." 1 Cor. 13:12
Pita onyeozi a revivalist. Ya mere, ihe ọ na-ekwusa? "Ee, m na-eche, dị ka ogologo dị ka m nọ n'ụlọikwuu a, ọ bụ ihe ziri ezi na m kpalie unu site a na-echetara. " 2 Pet. 1:13
Pita kwusara ochie eziokwu. Na na ọ bụ otú o mere ndị kwere ekwe, site ncheta.
Ka anyị na-echetara onwe anyị na gburugburu ebe anyị ọnwụ Jizọs na mbilite n'ọnwụ. Ka anyị kwuo banyere Chineke amara, ịhụnanya na ike. Ka anyị kwuo banyere a ndụ nke-adị ọcha. Ee, ka anyị na-agụ, na-akọwa na-ekwusa ozi Bible dum ìhè nke dum. Na ike a gbanwee ndụ na-enye Chineke otuto.
Echefula na Jizọs bụ ndụ ma na ọ hụrụ gị n'anya, (n'agbanyeghị ihe ọnọdụ gị asị ugbu a).